လေ့လာမှုအသစ်က Rob Weiss - Porn On Your Brain မကျူးလွန်သောလိင်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုချိတ်ဆက်ထားသည်
ရော့ Weiss အားဖြင့်နယူးလေ့လာမှု Links များ compulsive Porn အလွဲသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်,
လူသည်ညစ်ညမ်းနှင့်အတူစိုက်ထူခြင်းနှင့် orgasm အောင်မြင်ရန်နိုင်ပေမယ့်သူကတကယ့်ကမ္ဘာကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့င်သည့်အခါတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူရုန်းကန်နေရတဲ့။
လူသည်လိင်ရှိသည်နှင့်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာကမိတ်ဖက်နှင့်အတူအော်ဂဇင်အောင်မြင်ရန်နိုင်ပေမယ့်အော်ဂဇင်ရောက်ရှိတဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာအချိန်ယူနှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသူ disengaged ပုံတိုင်ကြား။
လူသည်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာကမိတ်ဖက်နဲ့စိုက်ထူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့နိုင်ပေမယ့်သူသာသည်သူ၏စိတ်တွင်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုအပိုင်းများကို replaying အားဖြင့်အော်ဂဇင်အောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
လူသည် ပို. ပို. ပို. ပြင်းထန်သောနှင့်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ရှာဖွေတာ, အမှန်တကယ်ကမ္ဘာကလိင်မှညစ်ညမ်းကြိုက်နှစ်သက်သည်။
A မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှု Alin Wéryနှင့်ယောလ Billieux အသုံးပြုပုံနှစ်ခုစလုံးဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်Université Catholique က de Louvain မှ, လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာများ, စွဲလမ်းအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏ဝိသေသလက္ခဏာများ, အသုံးပြုမှုပုံစံများ, စိတ်ရင်းနှင့်အကျိုးဆက်များအပေါ်အလင်းတှရေဲ့အဓိပ်ပာ။
Wéryနှင့် Billieux တက္ကသိုလ် messaging service, လူမှုကွန်ယက်များ, သုတေသနကွန်ယက်များ, နှင့်လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောဖိုရမ်များအပေါ်စုဆောင်းပြင်သစ်စကားပြောယောက်ျားတစ်ဦးအကြီးစားအွန်လိုင်းလေ့လာမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကို၏အမည်ဝှက်ကိုပိုပြီးရိုးသားအဖြေတွေကိုအောင်မြင်ရန်ကြိုးပမ်းအတွက်အာမခံခဲ့သည်။ အဆုံးမှာတော့ယခင်သုံးလကာလအတွင်းအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်စေ့စပ်င်သူကို 434 သို့မဟုတ်အထက် (အသက် 18 ဆိုလို) အသက် 29.5 အရည်အချင်းပြည့်သင်တန်းသားများကို-ယောက်ျားရှိခဲ့သည်။
တစ်ခုချင်းစီပါဝင်သူခြောက်လကဏ္ဍများခွဲခြားတစ် 91 ကို item စစ်တမ်းပြီးစီးခဲ့သည်။
အသက်အရွယ်, ပညာရေး / သိမ်းပိုက်, ကြားဆက်ဆံရေးအဆင့်အတန်း, လိင်, နောက်ဆုံးနှစ်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များ၏အရေအတွက်နှင့်လိင်လက်တွဲဖော်အမျိုးအစား (စသည်တို့ကိုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအချစ်ဇာတ်လမ်း, လိင်ရဲ့ buddy, လိင်လုပ်သား) အပါအဝင်လူမှု-လူဦးရေအချိုးအစား variable တွေကို (14 ပစ္စည်းများ),
အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများမှမြှုပ်နှံအပတ်စဉ်အချိန်အပါအဝင်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်ဆက်စပ်အပြုအမူတွေ (25 ပစ္စည်းများ),, အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအမျိုးအစားများ, ပိုက်ဆံကုန်, အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများစဉ်အတွင်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ကြိမ်နှုန်းယခင်ကစိတ်မဝင်စားသို့မဟုတ်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်စဉ်းစားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကြည့်ရှု, အရှက်ကွဲခြင်း၏ခံစားချက်များကို အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဆက်စပ်သော။
အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်း, တစ်ဦးကိုသုံးပြီးအကဲဖြတ် 12 ကို item ကိုအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်ခြင်းအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများများအတွက်အဆင်ပြေအောင်အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုခြင်း, ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးများနှင့်နေ့စဉ်ဘဝအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများစွဲလမ်းပုံစံများကိုကြည့်။
စတာတွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု, သိချင်စိတ် / သတင်းအချက်အလက်, ခံစားချက်စည်းမျဉ်း, အမည်မသိယဉျ, လူမှုရေး, အော့ဖ်လိုင်းလိင်တိုးတက်အောင်အပါအဝင်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့စိတ်ရင်း (23 ပစ္စည်းများ),
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်သည် 15 ကို item သုံးပြီးအကဲဖြတ် Erectile ရာထူးအမည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညွှန်းကိန်း (IIEF), erectile function ကို, orgasm function ကို, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, လိင်ဆက်ဆံမှုစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ခြုံငုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအဘို့အအကဲဖြတ်ထားပါသည်ရာ။
ဒါကြောင့် အကယ်. လေ့လာမှုသင်တန်းသားများကိုဘာသာရပ်သူတို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီနဲ့ရှာကြံစဉ်းစားဖူးခြင်းရှိမရှိ, ပြဿနာဖြစ်၎င်းတို့၏အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း, ရှိမရှိအပါအဝင်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူ self-ရိပ်မိပြဿနာပါဝင်ပတ်သက်မှု။
ငါ့ထံသို့တစ်ဦး သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲကုသမှုအထူးကု လယ်ပြင်၌အတှေ့အကွုံထက်ပို 20 နှစ်ပေါင်းအတူဤလေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်များမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းတော်တော်လေးအများကြီးရှိပါတယ်။ တိုတိုမှာသုတေသနအဖွဲ့ကစမ်းသပ်ဘာသာရပ်များတစ်ပတ်ကို5နာရီတစ်ပတ်ကို 33 မိနစ်ကနေအထိအဖြေကိုအတူ, အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်စေ့စပ်တစ်ပတ်ကိုသုံးနာရီပျမ်းမျှသုံးစွဲကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အများဆုံးနေရာအနှံ့အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်ဘာသာရပ်ကိစ္စ kinks နှင့် fetishes အပါအဝင်, "vanilla" မှအမာခံအထိအတူသင်တန်းသားများ၏ 99% ဖြင့်စေ့စပ်။
မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများအလားတူရလာဒ်များထုတ်လုပ်သကဲ့သို့အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဆိုပါတွေ့ရှိချက်, အတိအကျကိုမွကွေီးချိုးမရှိကြပေ။ ဒီအထူးသဖြင့်သုတေသနစိတ်ဝင်စားဖို့ရရှိသွားတဲ့အဘယ်မှာရှိပါကအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်ပြဿနာအသုံးပြုမှုများ၏အသေးစိတ်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ယောက်ျားရဲ့တွန်းအားကြည့်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပါတယ်။
သုံးစွဲဖို့တွန်းအား, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု (94.4%) သည် arousal (87.2%) feeling နှင့်အော်ဂဇင် (86.5%) ရရှိစာရင်းကိုပဲရှိတယ်။ ဒါက unsurprising ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်စိတ်ဓါတ်များကိုထိန်းညှိဖို့ကြိုးစားနေခြင်းနှင့်စိတ်ခံစားမှုစိတ်ဖိစီးမှု (73.8%) လျော့ / အပန်းဖြေစာရင်းစမ်းသပ်ဘာသာရပ်များနှင့်အတူလည်းခိုင်ခံ့လှုံ့ဆော်ခဲ့ကြသည်, ပျင်း (70.8%) သက်သာစေနိုင်ကြောင်းနေ့စဉ်ပြဿနာများ (53%) မေ့လျော့အထီးကျန် (44.9%) သက်သာနှင့်တိုက်ခိုက်ရေး စိတ်ကျရောဂါ / ဝမ်းနည်းမှု (38.1%) ဟာသူတို့ရဲ့အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေများအတွက်ဘုံအကြောင်းပြချက်အဖြစ်ရှင်းလင်းစွာလွတ်မြောက်ရန်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုအီ၏အခြားပုံစံများအနေဖြင့် dissociate တစ်ဦးအလိုဆန္ဒအလွန်မကြာခဏအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမောင်းပါဘူးနိုင်သောဖေါ်ပြခြင်း။ ထို့အပွငျဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအွန်လိုင်းသွားဘို့အကြောင်းပြချက်နှင့်ပြဿနာအသုံးပြုမှုအကြားအပြင်းထန်ဆုံး link ကိုစိတ်ဓါတ်များစည်းမျဉ်းကြောင်းကိုပြသသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်မိမိကိုယ်မိမိ sooth အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်စေ့စပ်နှင့်သူတို့၏စိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းညှိသောလူတို့၏သိသိသာသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု, arousal နှင့်အော်ဂဇင်များအတွက်အွန်လိုင်းသှားသောယောက်ျားထက်၎င်းတို့၏အွန်လိုင်းလိင်ဘဝနှင့်ပတ်သက်သောပြဿနာများတွေ့ကြုံခံစားဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။
ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ကျနော်တို့အကြောင်းကိုသိနှင့်အညီအလွန်ရှိပါတယ် အခြားအစှဲ, စွဲပျော်မွေ့၏အတွေ့အကြုံအတွက်လျော့နည်းစိတ်ဝင်စားခြင်းနှင့်လွတ်ခြင်းနှင့် dissociation ပိုမိုစိတ်ဝင်စားရှိရာ။ တနည်းအားဖြင့်စွဲလမ်းမှုကိုသူတို့လျော့နည်းခံစားအကြောင်းကိုပါပဲ, ကောင်းမွန်သောခံစားအကြောင်းကိုမရှိကြပေ။
အသိအမှတ်ပြုစမ်းသပ်ဘာသာရပ်များ၏မြင့်မားသောရာခိုင်နှုန်းထွက်ပေါက်များအတွက်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ အသုံးပြု. နှင့်ထွက်ပေါက်တစ်ခုအလိုဆန္ဒစွဲမှုပုံစံအားလုံးကိုတစ်ဦးယာဉ်မောင်းအဖြစ်ပစ္စုပ္ပန်ကြောင်းကို သိ. ခဲ့, ငါတို့စမ်းသပ်ဘာသာရပ်များတစ်သက်ဆိုင်ရာရာခိုင်နှုန်းသိသာထင်ရှားသောအကျိုးဆက်များအစီရင်ခံရန်မျှော်လင့်ထားနှင့်ကိုယ်ပိုင်ဖို့မယ်လို့ ပြဿနာအဖြစ်၎င်းတို့၏အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ -assess ။ ထိုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကိုအတိအကျအရာဖြစ်တယ်။
61.7% သူတို့ရံဖန်ရံခါသူတို့ရဲ့အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်. အရှက်ကွဲခြင်းသို့မဟုတ်အလားတူအနုတ်လက္ခဏာခံစားချက်တွေကိုခံစားခဲ့ရဖော်ပြခဲ့သည်။
49% သူတို့တစ်ခါတစ်ရံတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနှင့် / သို့မဟုတ်သူတို့ကိုယခင်ကစိတ်ဝင်စားဖို့မဟုတ်ကြကြောင်းလှုပ်ရှားမှုများအဘို့ကိုရှာဖွေ, ဒါမှမဟုတ်သူတို့စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်စဉ်းစားကြောင်းကိုအစီရင်ခံခဲ့သည်။
ပြဿနာအဖြစ်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကသူတို့အသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်သူယောက်ျား၏, 33.9% မှာအနည်းဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီတောငျးထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်။
အရေးကြီးပြဿနာအဖြစ်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကသူတို့အသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်သောသူတို့သညျအနိမ့် erectile function ကိုနှင့်ဘုံအကျိုးဆက်အဖြစ်အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒီတွေ့ရှိချက်ကိုတုံ့ပြန်မှာလေ့လာမှု၏စာရေးဆရာများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်အတူယောက်ျားသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်အတွက်ယုံကြည်မှုနည်းခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်နည်းလိင်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာကမိတ်ဖက်နှင့်အတူကျေနပ်ဖို့ထို့ကြောင့်လျော့နည်းနိုင်မည်အကြောင်းတွေးဆ။
ငါ, သို့သော်, မရေမတွက်နိုင်သောလူတို့သညျ (porn စွဲများနှင့်တခါတရံမျှသာ porn အေးစက်) နဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးနောက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးတစ်ဦးထက်ပိုတိကျမှန်ကန်အယူအဆ, သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝတွေကို၏ကျယ်ပြန့်အများစုသုံးဖြုန်းတဲ့သူယောက်ျားမှာရှာဖွေနေနှင့်တစ်ဦးအဆုံးမဲ့, အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးဖို့ masturbating ကြောင်းယုံကြည် အပြင်းအထန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်နှိုးဆွသော, ဒီအတွေ့အကြုံကနေ adrenaline ၏ jolt ပြီးနောက် jolt လာပြီ, ဖြစ်ကောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အချက်မှသိသိသာသာလျော့နည်းလှုံ့ဆော် porn ထက်တည်းသောအစစ်အမှန်ကမ္ဘာကဖက်, ရှာတွေ့များပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်တစ်ဦးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူရဲ့ဦးနှောက်တစ်ခုတည်းအတွက်-The-ဇာတိပကတိအားဖြင့်မိတ်ဖက်ရိုးရှင်းစွာလိုအပ် neurochemical အလုအယက်မပေးနိုငျပါရှိရာအမှတ်လိင်စိတ်နိုးထ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် Hyper-ဆွမျှော်လင့်ထားရန်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအေးစက်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကွောငျ့အအစစ်အမှန်ကမ္ဘာကမိတ်ဖက်တွေနဲ့အသုံးပြုသူ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED), နှောင့်နှေးအော်ဂဇင် (DE), နှင့် anorgasmia (အော်ဂဇင်ကိုရောက်ရှိနိုင်ခြင်း) ကိုတွေ့ကြုံခံစားစေနိုင်သည်။
ဤရွေ့ကား, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ၏မူကွဲချိတ်ဆက်ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဦးက 2012 စစ်တမ်း 350 Self-ဖော်ထုတ်လိင်စွဲ၏ 26.7% လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူပြဿနာများကိုအစီရင်ခံကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးကသေးငယ် လေ့လာချက် 23 အထီးလိင်စွဲမှာရှာဖွေနေ 16.7% erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအစီရင်ခံကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ်အသေး လေ့လာချက်, 19 အထီးလိင်စွဲမှာရှာဖွေနေဒီတစ်ခု, 58% လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူပြဿနာများကိုအစီရင်ခံကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီတော့မသက်ဆိုင်လေ့လာမှုကျနော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ကြပြီးတသမတ်တည်းအထူးသဖြင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သော porn အသုံးပြုမှုအတွက်စွဲလမ်းအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြားတစ်ဦး link ကိုမြင်လျှင်။
သံသယမရှိဘဲ, compulsive porn ကိုအသုံးပြုခြင်းမှ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုချိတ်ဆက်ဒီအထူးသဖြင့်လေ့လာမှု၏အရေးအပါဆုံး (နှင့်စွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအမျိုးသား) နိဂုံးပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ခံစားချက်စည်းမျဉ်းများနှင့်ပြဿနာအသုံးပြုမှုမှာကြိုးစားမှုအကြား link ကိုဖြစ်သကဲ့သို့သို့သော်သူတို့နီးပါးအဖြစ်မကြာခဏသူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျော်အပါးရှာအံ့သောငှါအဖြစ်စိတ်ဓါတ်များစည်းမျဉ်းရှာကြသည်ဖြစ်သောကြောင့်ယောက်ျားအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံသောတွေ့ရှိချက်ကိုလည်းသိသာသည်။ ကုသမှုအများဆုံးထိရောက်မှုပုံစံများ willpower နှင့်အတူစွဲလမ်းအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ပေါ်ပေမယ့်စွဲကျန်းမာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းယန္တရားများဖွံ့ဖြိုးဆဲမအာရုံစူးစိုက်နိုင်အောင်ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ကျနော်တို့ဒါများများစားစား, Self-soothing များအတွက်အလိုဆန္ဒအားလုံးအမျိုးအစားများစှဲအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ကြောင်းသည်အခြားသုတေသနကနေကိုသိရ တကယ်တော့စသည်တို့ကို, စွန့်ပစ်, ကြောက်, ပျင်း, အထီးကျန်, စိုးရိမျ, စိတ်ဓာတ်ကျခံစားလာသောအခါမှဖွင့်နိုင်ပါတယ်, (များသောအားဖြင့်ထောက်ခံနှင့်စာနာတခြားသူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး) ကျန်းမာနည်းလမ်းတွေထဲမှာစိတ်ခံစားမှုဒုက္ခဆင်းရဲနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှလေ့လာသင်ယူယေဘုယျအားဖြင့်ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ key ကိုဒြပ်စင်အဖြစ်မှတ်နေသည် ဣန္ဒြေစောင့်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးပိုမိုကောင်းမွန်ဘဝ။
အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများမှစွဲလမ်း, အထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်း, ဒီယေဘုယျစည်းမျဉ်းမရှိချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ပြုလုပ် Clinician ဤအချက်ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ကြောင့်အစဉ်အဆက်ထက် ပို. အရေးကြီးပါသည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, porn သူတို့စိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်တော်တော်များများဘာမှမှအများအားဖြင့်အခမဲ့, သတ်မရှိလုပ်ပိုင်, အမည်မသိ access ကိုရှာဖွေတာ, လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်, အားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးလူတို့နှင့်အတူ, ပိုမိုနေရာအနှံ့နှင့်နေ့အလွယ်တကူပေါက်နေသည်။ လူတွေကလည်းကျိန်းသေအားသာချက်ယူပြီးနေကြသည်။ ဥပမာ, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တဦးတည်း လေ့လာချက် အင်တာနက်ကိုရှာဖွေမှုများကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာလေ့လာချက်ရဲ့ 13 သန်းဆန်းစစ်ရှာဖွေမှုများကို (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 400 လူဦးရေသန်းကနေလာမယ့်) ၏ 2% ခေါ်ဆောင်သွားအကြောင်းအရာအချို့ကိုပုံစံရှာသောတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤလေ့လာမှု၏စာရေးဆရာများ, Ogi Ogas နှင့်စိုင်း Gaddam, တဦးတည်းအမှတ်အရေးအသားမှာ, သူတို့ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာအသေးစိတ် porn ကိုအသုံးပြုခြင်း, တစ်ဦးကဘီလီယံဆိုး Thoughts အပေါ်ကိုအင်တာနက်ရဲ့သက်ရောက်မှုအားဆွေးနွေးရန်:
1991 ခုနှစ်, World Wide Web ကိုအွန်လိုင်းသို့ သွား. ထိုနှစ်တွင်, America မှာထုတ်ဝေ 90 ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူမဂ္ဂဇင်းများထက်နည်းပါးလာရှိကြ၏, သင်တစ်ဒါဇင်ထက်ပိုမိုသယ်ဆောင်တဲ့သတင်းစင်ကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲ-ဖိပါပြီချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ခြောက်နှစ်အကြာတွင် 1997 အတွက် Web ပေါ်ရှိ 900 ညစ်ညမ်းက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးရှိခဲ့သည်။ ယနေ့ filtering software CYBERsitter လုပ်ကွက် 2.5 သန်းအရွယ်ရောက် web site များ။
ပို. ပင်အံ့ဖှယျ Ogas နှင့် Gaddam တစ်ဦးအရာဖြစ်လာခဲ့သည်ရှည်လျားသော "အသုံးပြုသူ-generated ညစ်ညမ်း" မီ, 2009 နှင့် 2010 ၎င်းတို့၏သုတေသနပြုကောက်ယူသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ sexy selfies ပညာရှင်ပီသစွာနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ porn တစ်ခုအဖြစ်နီးပါးအဖြစ်တီထွင်ခဲ့တယ်ဖြစ်ကြသည်။ ထိုပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ, ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်က်ဘ်ဆိုက်များချိန်းတွေ့နှင့်တရားဝင်အဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မှီဘူးသောအခြားဆိုက်များကိုအမြိုးမြိုး "အရွယ်ရောက်ပြီးသူ။ " 24 /7/ 365 တော်တော်များများ unmeasurable ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိရရှိနိုင်ကြောင်းကိုအွန်လိုင်း porn ပမာဏကိုဒါ ။ porn သုတေသီများတိကျစွာကခြေရာခံရန်အဘို့အဘယ်သူမျှမဖြစ်နိုင်သောလမ်းလည်းမရှိသောကြောင့်အလျင်အမြန်နေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့နှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောအရပ်တွင်တင်ခဲ့သည်လျက်ရှိသည်။
သူတို့မပျော်ရွှင်တစ်ခုနောက်ခံအရင်းအမြစ်အဖြစ်သူတို့ရဲ့တစ်ကိုယ်တော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုကြည့်ရှုရန်မလိုနှင့် / သို့မဟုတ်သူတို့ရိုးရိုးလည်းရှက်ကြောက်သောကြောင့်, ဝမ်းနည်းစရာ, porn အပေါ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုမှီခိုဖြစ်လာတဲ့သူတွေမကြာခဏအကူအညီရှာတွန့်ဆုတ်နေကြသည်။ သူတို့အကူအညီရှာအံ့သောငှါပြုကြသောအခါ, သူတို့မကြာခဏဆက်စပ်ရောဂါလက္ခဏာတွေ-စိတ်ကျရောဂါ, အထီးကျန်ဆန်, ကြားဆက်ဆံရေးကိုဒုက္ခ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု, နှင့်တူသော-ထက် porn ပြဿနာကိုယ်နှိုက်များအတွက်အကူအညီကိုရှာ။ အတော်များများကဆေးဝါးများယူနှင့် / သို့မဟုတ်အစဉ်အဆက်ဆွေးနွေးခြင်း (သို့မဟုတ်ပင်အကြောင်းမေးခံရ) ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမရှိဘဲတိုးချဲ့ကာလအဘို့ psychotherapy တက်ရောက်ရန်။ ကဲ့သို့သောသူတို့၏အဓိကပြဿနာမြေအောက်နှင့်တည်းကကုသမှုမရှိဘူးဖြစ်နေဆဲ, မိမိတို့ရောဂါလက္ခဏာတွေ abate ပါဘူး။
porn စွဲ (နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ) အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက, ငါ့မကြာသေးမီကထုတ်ဝေစာအုပ်တွေထုတ်စစ်ဆေး, အမြဲတမ်းဖွင် နှင့် လိင်စွဲလမ်း 101။ သင်ထင်လျှင်သင်တစ်ဦးကို client, ဒါမှမဟုတ်သင်သိတစ်စုံတစ်ဦးကိုလိင်, porn သို့မဟုတ်မေတ္တာစွဲ, ကုထုံးနှင့်ကုသမှုရည်ညွှန်းနှင့်အတူလက်တွေ့အကူအညီများလိုအပ်နိုင်ပါသည်တွေ့နိုင်ပါသည် ဒီမှာ နှင့် ဒီမှာ.
ရော့ Weiss အားဖြင့်မူရင်းဆောင်းပါး Link ကို